သူမအတွက် အဆင်မပြေတဲ့ရာသီဥတုအား ရွေးချယ်ပြောပြခဲ့သူ BLACKPINK’s Lisa
Lisa ကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံသူလေးပီပီ သူမကြိုက်တဲ့ ရာသီဥတုလေးကလည်း သူများနဲ့ မတူပြန်ပါဘူး။ အမြဲလိုလို တောက်တောက်ပပနေတတ်သူလေးဖြစ်တာကြောင့် ရာသီဥတုနဲ့တင်စားရမယ်ဆိုရင် နွေဦးရာသီလေးနဲ့ တူသူလေးပါပဲ။
ဒီတော့ Lisa အတွက် နေရထိုင်ရခက်တဲ့ ရာသီဥတုလေးက ဘာဖြစ်မယ်လို့ ထင်မိပါသလဲ? Lisa ကိုယ်တိုင်ကလည်း သူမအတွက် အခက်တွေ့ရတဲ့ ရာသီဥတုက ဆောင်းရာသီဖြစ်ကြောင်းကို ပြောပြခဲ့ပါတော့တယ်။ Complex နဲ့အင်တာဗျူးမှာ Lisa က နွေရာသီကိုကြိုက်ပြီး အအေးဒဏ်ကိုမခံနိုင်ကြောင်း ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
“ကျွန်မက နွေရာသီမှာ မွေးလာတာဆိုတော့ နွေရာသီကို သိပ်ချစ်ပါတယ်။ တစ်ဖက်မှာတော့ ဆောင်းရာသီကို မကြိုက်ပါဘူး။ အေးခဲတဲ့ဒဏ်ကို ကျွန်မက မခံစားနိုင်ပါဘူး။ နွေရာသီဖွားတစ်ယောက်ဖြစ်တော့ ‌အအေးဒဏ်နဲ့ပတ်သက်လာရင် အလွယ်တကူကို ခံစားရတတ်တယ်။”
“နွေရာသီက ပူတယ်ဆိုပေမဲ့ ကျွန်မ ခံနိုင်ရည်ရှိတယ်။ အေးတာကျတော့ မတူတော့ဘူး။ အင်္ကျီအထပ်ထပ်ဝတ်ရင်တောင် အေးတဲ့ဒဏ်ကို မခံနိုင်ဘူး။ အပူကို ခံနိုင်ရည်ရှိနေတာ.. ကြည့်ရတာတော့ ကျွန်မက ထိုင်းနိုင်ငံသူဖြစ်နေလို့ ထင်ပါရဲ့” ဆိုပြီး Lisa က ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ပူလွှလွှ အရသာလေးကို ခံစားရတာကြိုက်တဲ့ Lisa ကတော့ အေးတဲ့ဒဏ်ကို မကြိုက်ရှာပါဘူး။ ပရိသတ်ကြီးတို့ကော Lisa လိုပဲ နွေရာသီကို ကြိုက်ကြရဲ့လား? ဒါမှမဟုတ် ဘယ်ရာသီဥတုကို အကြိုက်ဆုံးလဲ? ဆိုတာ ဖြေကြည့်ကြပါဦး။
Next ‘The Faces of 2021’ အတွက် စကာတင်စာရင်းဝင်လာတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံသား နာမည်ကြီးကြယ်ပွင့်များ »
Previous « ၂၀၁၀ ခုနှစ်​တွေမှာ ​ခေါင်း​ဆောင်မင်းသားအဖြစ် K-drama ​လောကကို ကြီးစိုးခဲ့ကြတဲ့ နာမည်ကြီး ကိုရီးယားမင်းသားများ
“MONEY” သီချင်းနဲ့အတူ ပွဲတိုင်းကျော်နေပြီး အမြန်ဆုံးစံချိန်တင် K-Pop Soloist ဖြစ်လာတဲ့ Lisa
2022 ကို အပိုင်သိမ်းဖို့ ချီတက်လာကြတဲ့ TV3 က ထိပ်တန်းမင်းသမီး (၆) ဦးရဲ့ ဇာတ်လမ်းသစ်များ